Simutrans: Lalao Simulation Transport maimaim-poana sy misokatra | Avy amin'ny Linux
Simutrans: Lalao Simulation Transport maimaim-poana sy misokatra
Linux PostInstall | 13/04/2022 06:00 | fampiharana, Games
Toy ny, ny fanavaozana farany ny FlightGear, un Open source sidina simulation lalao, izay saika nandalo teo aminay, ary noresahintsika tato ho ato. Androany dia hanohy ny fanavaozana vaovao misy mahaliana hafa izahay Lalao Open Source Transportation Simulation, antsoina hoe "Simutrans". Izay hambarantsika anio, mba tsy ho voamarik’izy ireo.
Tsiahivina fa sambany no niatrika ity lalao ity, izay vao lasa mihoatra ny 10 taona, fony aho zara raha tao amin'ny 102.2.2 version. Noho izany, anio dia hifantoka amin'ny vaovao sy ankehitriny izahay 123.0.1 version, navoaka tamin'ny January 29 amin'ny 2022, hanehoana ny anao misintona sy mametraka.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana amin'ny lohahevitra anio, momba ny fanavaozana vaovao hafa avy amin'ny hafa lalao maimaim-poana sy misokatra ho an'ny GNU/Linux, ary indrindra momba ny "Simutrans", avelao ho an'ireo liana ireto rohy manaraka ireto ho an'ny sasany Lahatsoratra mifandraika. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"Simutrans dia lalao simulation open source eo ambanin'ny Artistic License 1.0 ho an'ny Windows, AmigaOS, BeOS, Mac OS X ary Linux izay mifantoka amin'ny fitaterana entana, mpandeha, mailaka ary angovo. Sahala amin'ny Transport Tycoon na Railroad Tycoon, ny tanjon'ny Simutrans dia ny hamorona toe-karena marin-toerana ary hampitombo ny orinasa ary hisorohana ny bankirompitra.". Simutrans: lalao style Tycoon Transport
GeoFS: Lalao simulation aerial avy amin'ny navigateur mampiasa Cesium
1 Simutrans: lalao simulation fitaterana cross-platform
1.1 Inona no atao hoe Simtrans?
1.2 Inona ny rakitra Paksets?
1.3 Ahoana ny fomba hahazoana sy fampiasana ny lalao?
1.4 pikantsarin'ny lalao
Simutrans: lalao simulation fitaterana cross-platform
Inona no atao hoe Simtrans?
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialy de "Simutrans", amin'izao fotoana izao ity lalao simulation ity dia voalaza fohifohy toy izao manaraka izao:
"Simutrans dia lalao simulation fitaterana maimaim-poana sy misokatra. Ny tanjonao dia ny hanangana orinasa fitaterana mahomby. Mitondra mpandeha, mailaka ary entana amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, lalamby, lalana ary sambo. Ampifandraiso ireo tanàna, distrika, tranom-panjakana, indostria ary toerana fizahan-tany manangana tambajotra fitaterana nofinofy".
Mandritra izany fotoana izany, ho an'ny antsipiriany bebe kokoa dia manampy ireto manaraka ireto izy ireo, ankoatra ny zavatra hafa:
"Simutrans dia lalao modular, noho izany, amin'ny alàlan'ny default dia ny motera lalao ihany no misy azy. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny rakitra antsoina hoe paksets, izay azo alaina mora foana, dia afaka manomboka milalao ianao. Misy ihany koa ny Simutrans amin'ny Steam. Ary amin'izao fotoana izao koa ho an'ny Windows, Linux & Mac".
Inona ny rakitra Paksets?
Araka ny mpamolavola lalao, un Archive fonosana Voafaritra toy ny:
"File iray izay mampiditra angon-drakitra iray izay ilain'i Simutrans. Ahitana ny angon-drakitra rehetra momba ny sary, ny zavatra tsirairay (fiara, lalana, zotra fiaran-dalamby, tranobe, sy ny sisa), ary ny fampahafantarana mampifandanja ny lalao rehetra (toy ny fandaniana, ny hafainganam-pandeha, ny fahafaha-manao, sy ny maro hafa) ilaina hamitana ny lalao. Ary antsoina hoe pakset izy ireo, satria ny rakitra rehetra dia voatsindry (avy amin'ny 'Paket' alemana) mba hitsitsiana toerana toy ny rakitra pak.".
Ankoatra izany, manazava izy ireo fa noho ny voalaza etsy ambony:
"Paksets ihany koa no mamaritra ny haben'ny sary ampiasaina, io isa io dia ny haavony sy ny sakan'ny efamira tsirairay amin'ny pixel. Ity habe ity dia matetika aseho eo am-piandohan'ny anarana pakset, ohatra, pak64 dia manana efamira 64px, raha pak128 kosa manana efamira 128px. Ny fonosana sasany dia tsy mampiseho isa amin'ny anarany, fa ataony mazava tsara ny habeny ao amin'ny famaritana fonosana.".
Ahoana ny fomba hahazoana sy fampiasana ny lalao?
Para misintona, mametraka ary mihazakazaka tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto ianao:
Mandeha fizarana fampidinana ary alaivo ny rakitra voatsindry ny installer ho an'ny Linux (32 na 64 bits).
Sokafy ny rakitra azo (simulinux-x64-123-0-1.zip).
Sokafy terminal iray ao amin'ny lahatahiry vao noforonina (simutrans).
Alefaso ny baiko baiko: «./simutrans»
Ao amin'ny varavarankely Simutrans misokatra voalohany, mifidiana Pakset ary miandry ny fampidinana sy ny fametrahana azy.
Aorian'ny fametrahana ny rakitra Pakset dia tsy maintsy manohy ny fametrahana sy ny dinamikan'ny lalao ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny, momba izany sy ireo fanambarana hafa ho avy dia manoro hevitra izahay hitsidika tsindraindray ny anao Wiki. Ary koa, avy amin'ny tranonkala ofisialin'izy ireo ao amin'ny SourceForge.
Raha fintinina, araka ny hitantsika, "Simutrans" Izany dia vaovao tsara, feno fanatsarana mahasoa. Inona no azo antoka fa hataon'izy ireo, io lalao io dia mijanona ho iray amin'ireo vitsy simulator sidina loharano misokatra, izay tena mahafinaritra. Fanampin'izany, mba ho tena mamolavola sy manabe. Manantena izahay fa ny fanavaozana vaovao dia hitohy hivoatra sy havoaka tsy tapaka, mba hitomboan'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Simutrans: Lalao Simulation Transport maimaim-poana sy misokatra
Efa nivoaka ny Cantata 2.5 ary ireo no vaovao